नि: शुल्क IPTV (२०२०) कसरी प्राप्त गर्ने - नि: शुल्क स्ट्रिमि Services सेवा र अनुप्रयोगहरू - मनोरञ्जन
केबल र स्याटलाइट टिभी विगतको मनोरन्जन प्रणाली बन्न गइरहेको छ। आधुनिक आविष्कारहरूले आईपीटीभीको परिचयमा नेतृत्व लिएको छ, जसलाई इन्टरनेट प्रोटोकल टेलिभिजन पनि भनिन्छ। सरल शब्दहरूमा, यसले तपाइँको टेलिभिजनको फुर्सत लिनको लागि तपाइँको इन्टर्नेट जडानको उपयोग गर्दछ।
यसबाहेक, IPTV प्लेटफर्मको अनुकूलतामा निर्भर गर्दछ, तपाईं यसलाई कुनै पनि उपकरणमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यो धेरै सेवाहरू र निजीकृत अनुभवको साथ आउँदछ। लोकप्रिय अनुप्रयोगहरू जस्तै हटस्टार, Hulu , डिज्नी + , नेटफ्लिक्स , र प्राइम भिडियोहरू IPTV को प्रमुख उदाहरण हो।
यद्यपि IPTV माग भएको भिडियोको बारेमा मात्र होईन। त्यहाँ अन्य सेवाहरू पनि छन्। के तपाई नि: शुल्क आईपीटीभी कसरी प्राप्त गर्ने जान्न चाहानुहुन्छ? त्यसो भए यो लेखले तपाईलाई यो कानूनी रुपमा प्राप्त गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ। तपाइँलाई मनपर्ने उपकरणमा टेलिभिजनको मजा लिन पाइरेसी मार्गमा जान तपाईंलाई आवश्यक छैन।
IPTV को प्रकार बुझ्नुहोस्: सुविधाहरू
तपाईंले निःशुल्क आईपीटीभी फेला पार्न सुरु गर्नु अघि, तपाईंले बुझ्नु पर्छ IPTV सेवाहरूको बिभिन्न प्रकार जुन आजको डिजिटल उन्नत संसारमा उपलब्ध छन्:
१. मांगमा भिडियो
यी IPTV सेवाहरू हुन् जुन हॉटस्टार र नेटफ्लिक्सको माथिको दिइएका उदाहरणहरूसँग प्रायः समान छन्। यो जहाँ तपाइँ छनौट गर्न सक्नुहुन्छ र कुनै पनि टिभी श्रृंखलाहरू स्ट्रिम गर्नुहोस् वा चलचित्र जब तपाईं चाहानुहुन्छ। यो तपाईं तिनीहरूलाई डाउनलोड गर्न को लागी सुविधा ल्याउँछ वा तिनीहरूलाई पछाडि पुनः सुरू गर्न पज गर्नुहोस्।
२. मांगमा टेलिभिजन
यो जहाँ Hulu अनुप्रयोग एक आदर्श उदाहरण हो। यसले तपाईंको केबल वा सट्टेलइट टिभीमा उपलब्ध धेरै टिभी च्यानलहरूको स brings्ग्रह ल्याउँछ। यी च्यानलहरू सिधा अनुप्रयोगमा उपलब्ध छन्, र तपाईं तिनीहरूलाई वास्तविक-समयमा पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ।
यसैले, तपाइँ च्यानलहरू प्रसारण गर्दै गरेको सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा उनीहरूले देखाउने विज्ञापनहरू समावेश गर्दछ। प्रत्यक्ष समाचार र खेलहरू पनि यो सेटको एक अंश हो। यद्यपि, बिभिन्न अनुप्रयोगहरूको च्यानलहरूसँग फरक साझेदारी र सम्झौता हुन्छ। त्यसैले च्यानलहरूको उपलब्धता फरक हुन सक्छ।
Live. प्रत्यक्ष टेलिभिजन
यो हाल के भइरहेको छ हेर्नका लागि उपयुक्त एक पूर्ण लाइभ टेलिभिजन हो। यो प्राय भुक्तान-प्रति अवलोकन प्रणाली हो जुन तपाइँलाई निश्चित घटना हेर्नको लागि भुक्तान गर्न अनुमति दिन्छ। उदाहरण को लागी, ESPS + प्रति दृश्य विकल्प भुक्तान विकल्प मार्फत फाइट घटनाहरूको प्रत्यक्ष प्रसारण प्रदान गर्दछ। यद्यपि केहि सेवा प्रदायकहरूले अझै पनि तपाईका लागि नि: शुल्क प्रत्यक्ष टेलिभिजन डेलिभर गर्न काम गर्छन्।
Sched. अनुसूचित प्रसारण
यो भिडियो-मा-माग जस्तै हो, तर तपाईं प्रसारणको तालिकामा पहुँच प्राप्त गर्नुभयो। केही आईपीटीभीहरूको निश्चित समय फ्रेम हुन्छ जब उनीहरूले विशेष कार्यक्रम वा च्यानल प्रसारण गर्नेछन्। तपाईं साइन अप र तिनीहरूलाई हेर्न को लागी बसोबास गर्न सक्नुहुन्छ।
Time. समय शिफ्ट गरिएको टेलिभिजन
यो सेवा हो जहाँ तपाईं प्राय: नि: शुल्क आईपीटीभी अनुप्रयोगहरू वा प्लेटफर्महरू भेट्टाउनुहुनेछ। समय सारिएको टेलिभिजनले आईपीटीभी प्रदायकलाई १२, २,, वा hours 48 घण्टाको खाली ठाउँ पछि टिभी प्रदर्शन गर्न अनुमति दिन्छ। यसैले तपाईले हेर्न सक्नुहुने सामग्री थोरै ढिलो र प्रत्यक्ष वा ताजा छैन। यो सामान्यतया नि: शुल्क IPTV प्रस्ताव गर्दछ। यो सामान्य टेलिभिजन जत्तिकै राम्रो छ। तपाईंको ढिलाइ भएको प्रसारण छ।
तपाईं कसरी नि: शुल्क IPTV प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ?
पूंजीवाद प्रीमियम अनुप्रयोगहरू र IPTV सेवाहरूको परिचयको साथ एक सबै-समय उच्च मा छ। तपाईलाई नि: शुल्क IPTV सेवाहरूको आनन्द लिन यो असम्भव जस्तो देखिन्छ। खुसीको खबर! तपाईं अझै नि: शुल्क आईपीटीभी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ आईपीटीभी नि: शुल्क हेर्नका लागि कानूनी रूपमा सबै तरीकाले उपलब्ध छन्।
नि: शुल्क IPTV अनुप्रयोगहरू डाउनलोड गर्दै:
असंख्य कम्पनीहरू र सेवा प्रदायकहरूले आईपीटीभी अनुप्रयोग प्रदान गर्न लगानीमा काम गरिरहेका छन्। तसर्थ, तपाईं ती समर्थन अनुप्रयोगहरूमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। हो, यो आवश्यक पर्दछ तपाईंले तिनीहरूको कम्प्याटिबिलिटी जाँच्न।
केहि अनुप्रयोगहरू सबै प्लेटफर्महरूसँग उपयुक्त नहुन सक्छ। एकचोटि तपाईंले बुझ्नुभयो कि ती अनुकूल छन्, तपाईं तिनीहरूलाई किन्न सक्नुहुन्छ। तपाईका लागि नि: शुल्क टिभी प्राप्त गर्न तपाईलाई सजिलो छ। जे होस्, तिनीहरूमा सामग्री मूल वा केही कम बजेट उत्पादन हुन सक्छ। तसर्थ, तपाईं धेरै आशा गर्न सक्नुहुन्न।
केहि अनुप्रयोगहरूले तपाइँलाई विशेष सामग्री ल्याउन अन्य टिभी च्यानलहरू र कम्पनीहरूसँग साझेदारी गर्न सक्दछन्। त्यसोभए तपाइँको जाने बाटो छ।
VPN प्रयोग गर्नुहोस्:
यो तरिका राम्रो हुनेछ यदि तपाईं एक प्रयोग गर्नुहुन्छ VPN यी नि: शुल्क सेवा प्रदायकहरूको साथ। धेरै जसो समय, तिनीहरूसँग तेस्रो पक्षको विज्ञापन र कुकीहरू हुन सक्छन् जुन तपाईंको अनुभवलाई अवरोध पुर्‍याउन सक्छ। केहि स्थानहरू र स्वचालित रूपमा स्वचालित रूपमा तपाईंको डाटा जम्मा गर्न को लागी प्रयास गर्न सक्दछ।
VPN प्रयोग गर्नाले यस्ता सुरक्षा खतराहरूको सम्भाव्यतालाई घटाउँदछ। सँधै VPN प्रयोग गर्नुहोस्। यो पूर्ण कानूनी हो र ईन्टरनेट प्रयोगकर्ताको लागि वरदान हो।
परीक्षण संस्करण सक्रिय गर्दै:
यदि तपाईं अधिक लोकप्रिय च्यानलहरू सहित प्रीमियम-ग्रेड सामग्री र सेवाहरूको मजा लिन चाहानुहुन्छ भने, तपाईं अनुप्रयोगहरूको ट्रायल संस्करण प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। यी परीक्षण संस्करणहरू एप्समा उपलब्ध छन् जुन सदस्यता आवश्यक पर्दछ। यद्यपि केहि अनुप्रयोगहरू मन पराउँछन् नेटफ्लिक्सले कुनै परीक्षण प्रदान नगर्न सक्छ संस्करण
त्यो मात्र सीमितता हो। प्राय: परीक्षण संस्करणहरू जहाँसुकै सात दिनदेखि एक महिनासम्म रहन्छन्। तसर्थ, तपाईंले परीक्षण अवधि जाँच गर्नुपर्नेछ। याद गर्नुहोस् कि तपाईंले भुक्तानी विकल्प प्रदान गर्नुपर्नेछ।
एकचोटि तपाई परीक्षण संस्करण अन्त्य गर्न सक्नुहुनेछ, सदस्यता विकल्पमा गएर तिनीहरूलाई रद्द गर्नु उत्तम हुन्छ। प्राय: सबै सेवा प्रदायकको परीक्षण सक्रिय गर्न बिभिन्न तर धेरै सीधा विधि छ। जे होस्, ती सबै सबै एक स्वत: नवीकरण प्रक्रिया पोस्ट-ट्रायलको साथ काम गर्दछन्। त्यसोभए निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ यसलाई रद्द गर्नुहोस्।
बहु परीक्षणहरू प्राप्त गर्नुहोस्:
वैकल्पिक रूपमा, यदि तपाईंसँग बहु संख्याहरू र ID हरू छन् भने, तपाईं विभिन्न परीक्षणहरूको मजा लिन सक्नुहुन्छ। उदाहरण को लागी, एक पटक आफ्नो उपकरण प्रयोग गरेर र त्यसपछि आफ्नो आमा वा बुवाको उपकरण प्रयोग गरी अर्को परीक्षण सदस्यता लिन र यस्तै। केही सेवा प्रदायकहरूले समय-समयमा परीक्षण प्रस्तावहरू रोल आउट गर्दछ ताकि तपाईं यसलाई पनि जाँच गर्न सक्नुहुनेछ।
जे होस्, बहु परीक्षणहरूको मतलब यो छ कि तपाईंले उनीहरूको मिति ट्र्याक राख्न सक्नुहुनेछ समयमै सदस्यता रद्द गर्न। कहिलेकाँही यसले कार्य गर्दैन किनभने अनुप्रयोग सदस्यताहरूको सम्बन्धमा समय ट्र्याक गुमाउन सजिलो छ। यसैले, तपाई सेवा को लागी चार्ज हुन समाप्त हुनेछ। यो पक्कै उस्तै उपकरणमा काम गर्दैन जुन तपाईं अघिल्लो परीक्षणहरू पाउनुभयो, त्यहाँ एक विशेष उपकरण आईडी छ जुन अनुप्रयोगहरूले परीक्षणको सदस्यतासँग रजिस्टर गर्दछ।
१ क्यू म कहाँबाट नि: शुल्क IPTV अनुप्रयोगहरू डाउनलोड गर्न सक्छु?
बर्ष:तपाईंको व्यक्तिगत जानकारी, ह्याकि and र अन्य समस्याहरूको सम्बन्धमा सुरक्षाको लागि, यो एक विश्वसनीय स्रोतबाट अनुप्रयोगहरू डाउनलोड गर्न उत्तम हो। तपाईं विभिन्न उद्यमहरूको प्लेस्टोरमा धेरै अनुप्रयोगहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ।
सुरक्षालाई जोखिममा पुर्‍याउने बिभिन्न अनधिकृत वेबसाइटहरूबाट अनुप्रयोगहरू डाउनलोड नगर्नुहोस्। उनीहरूले प्रदान गरेको एपीके फाईलहरू वास्तविक नहुन सक्छ। केहि अनुप्रयोगहरूले तपाईको व्यक्तिगत जानकारीलाई तेस्रो पक्षमा बेच्न प्रयोग गर्दछ।
२Q म कसरी थाहा पाउन सक्छु यदि आईपीटीभी वास्तविक छ?
बर्ष:यो सत्य हो कि खेल स्टोरहरू पनि नक्कली अनुप्रयोगहरूको सम्भावित खतराबाट पूर्ण रूपमा सुरक्षित छैनन्। कुनै अनुप्रयोगको प्रमाणीकरण वा प्रमाणीकरणको लागि जाँच गर्नुहोस्। यदि कुनै होईन भने, तब तपाईले प्रयोगकर्ता समिक्षा जाँच गर्न सक्नुहुन्छ। अन्य प्रयोगकर्ताहरू द्वारा प्रदान गरिएको समीक्षा पढेर यो अनुप्रयोगको सत्यताको लागि तपाईको तुलना गर्न सजिलो छ।
3Q। के त्यहाँ आईपीटीवी अनुप्रयोगहरूको साथमा चोरीको जोखिम छ?
बर्ष:त्यहाँ एक सम्भावना छ कि आईपीटीभी अनुप्रयोगहरू जुन तपाईंले स्थापना गर्नुभयो सामग्री पिरि .्ग हुन सक्छ। यद्यपि, प्राय जसो समय, यदि तपाईंले यसलाई विश्वसनीय स्रोतबाट डाउनलोड गर्नुभएको छ, गुगल प्ले स्टोर जस्ता, तपाईं गलत हुनुहुन्न। कसैले तपाईंलाई दोषारोपण वा चोरीको लागि दोष दिदैन।
जे होस्, यदि तपाइँ यसलाई अज्ञात स्रोत वा वेबसाइटबाट प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, यो जानाजानी देखिन सक्छ, र तपाईंलाई पाइरेसीको लागि शुल्क लगाउन सकिन्छ।
4Q। मलाई आईटीटीभीको लागि स्मार्ट टिभी छैन भने मलाई के चाहिन्छ?
बर्ष:तपाईं लोकप्रिय सेवा प्रदायकहरू जस्तै अमेजनको फायरस्टिक टिभी वा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ बर्ष तपाइँको पुरानो टिभीलाई स्मार्ट टिभीमा बदल्नको लागि यदि तपाइँको टिभीमा एचडीएमआई पोर्ट उपलब्ध छ भने। यद्यपि धेरै पुरानो टेलिभिजन सेटहरूमा कनेक्टिविटीको लागि HDMI पोर्ट नहुन सक्छ।
यसको लागि, तपाईं एक अतिरिक्त एडेप्टर खरीद गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई ट्रान्समिटर पनि भनिन्छ, जुन तपाईंको टिभीको आरसीएमा जडान हुन्छ र तपाईंलाई टिभीको लागि एचडीएमआई पोर्ट प्रदान गर्दछ। यस मार्फत, तपाईं जडान गर्न सक्नुहुन्छ फायरस्टिक टिभी र त्यस्तै स्मार्ट टिभीको फुर्सदको मजा लिन। वैकल्पिक रूपमा, केहि कम्पनीहरूले एक सेटअप बक्स प्रदान गर्दछ तपाईंको टिभीलाई आईपीटीभीमा बदल्नको लागि।
5Q। के तपाई अन्य उपकरणहरूमा IPTV प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ?
बर्ष:कम्पनीहरू बीचको प्रतिस्पर्धाले तिनीहरूलाई अनुप्रयोगहरूको लागि अझ राम्रो अनुकूलताका साथ आउनका लागि नेतृत्व गरेको छ। यसैले, तपाईं विभिन्न प्लेटफर्महरूमा विभिन्न स्ट्रिमि and र IPTV अनुप्रयोगहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। आज, प्राय जसो आईपीटीभी स्मार्टफोन, ट्याब्लेट, गेमि Con कन्सोलको साथ उपयुक्त छ। जहाँसम्म, यो अनुप्रयोगले तपाईंको OS वा उपकरणलाई समर्थन गर्दछ भन्ने कुराको लागि यो अनुप्रयोगको अनुकूलताको लागि तपाईंले जाँच गर्नुपर्दछ।
IPTV निस्सन्देह एक क्रान्तिकारी टेक्नोलोजी हो। यो तपाईं लाई उच्च गति मा निर्बाध मनोरञ्जन ल्याउँछ लामो समय सम्म तपाईं सभ्य इन्टरनेट छ। तपाईलाई उच्च गति चाहिदैन, कि त यसले मानक जडानको साथ कार्य गर्दछ। जहाँ तपाईं केबल टिभी संकेत पाउन सक्नुहुन्न क्षेत्रहरूमा, यो एक उत्तम विकल्प हो।
अनन्त मनोरन्जनका लागि नि: शुल्क आईपीटीभी लिन मद्दतको लागि यी ज्ञात विधिहरू मात्र हुन्। आशा छ, तपाईं अनलाइन उपलब्ध अनगिन्ती नि: शुल्क अनुप्रयोगहरू मार्फत तपाईंको समयको लायक केहि पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसोभए तपाइँको अनुप्रयोग स्टोरमा भ्रमण भुक्तान गर्न र नि: शुल्क आईपीटीभी प्रदायकहरूलाई जाँच गर्न समय आयो।
भनेको छ कि संग, आफ्नो नि: शुल्क IPTV आनंद!
सर्वश्रेष्ठ केबल टिभी विकल्प २०२०
फिल्म हेर्नुहोस् अनलाइन नि: शुल्क
nox अनुप्रयोग प्लेयर प्रयोग गर्न सुरक्षित छ
ट्विच एचटीएमएल turn लाई कसरी बन्द गर्ने
एप्पल संगीत साइन अप विद्यार्थी
के तपाईंले रोबलोक्स डाउनलोड गर्नुपर्‍यो?